I-china imigqa engu-11 i-HIFU yabakhiqizi bobuso nomzimba nabaphakeli | Ubuhle
Imigqa eyi-11 i-HIFU yobuso nomzimba
Ubuso obugugile bokuphakamisa umzimba obumba umzimba we-Vertical HIFU
Umphumela osheshayo we-Wrinkls ususa i-HIFU
● Umkhiqizi Wokuqala WaseChina
● Imigqa eyi-11 ye-HIFU Patent No. ZL2015 2 0088495.8
● I-Menobeauty inikezele nge-OEM enziwe ngokwezifiso kakhulu kusukela ngo-2014, imigqa ephelele ye-HIFU cartridges ingaba ngu-10000 isibhamu, isibhamu esingu-20000, isibhamu esingu-25000, isibhamu esingu-26000 sincike emakethe yakho.
● Ingqikithi yama-Cartridge ayi-8
I. Uhlolojikelele lwe Umshini we-HIFU
I-scalpel ye-ultrasonic, ifaka imisebenzi emithathu yokuphelelisa-ukuqinisekisa, i-rhytidectomy nokubumba. Ukuthuthuka kwe-scalpel ye-ultrasonic ukuthi isebenzisa amandla we-ultrasonic asezingeni eliphakeme kakhulu, angena ngokujulile, akwazi ukufinyelela ungqimba lwesikhumba se-SMAS, okwenza i-collagen ithole isivumelwano ngokushesha futhi ivuselele imicu ye-collagen, ukuze ukuqina kwesikhumba kuthuthukiswe kusuka ungqimba lwesikhumba (indlela ephephile yokulungisa). Kuyindlela ephephe kunazo zonke futhi ephumelela kunazo zonke yokwelashwa kwesikhumba ebusweni kanye nokwelashwa okuxegayo njengamanje. Umphumela wokukhuthaza umlingo wokulwa nemibimbi wezinto zokusebenza zesikhumba se-scalpel, insiza yokusebenza yesikhumba esiphambanweni, ubonwe yigunya lezimboni zobuhle ngaphandle kwesilonda, akukho ukululama, ukuphuma kwegazi nezikhathi eziningi zokwelashwa kokuphakanyiswa kobuso, okuhlonishwa njengomlingo ukukhanya kwaphakade okuncane.
II. Isimiso seUmshini we-HIFU
Ukugxila kwe-Ultrasonic kufinyelela ungqimba lwe-SMAS nge-ultrasound yayo egxile kakhulu emandleni, kuthuthukisa ukumiswa kwe-SMAS, kuxazululwe ngokuphelele izinkinga zokuwohloka ebusweni nokuphumula. Ibeka ngokunembile amandla e-ultrasonic ku-SMAS 4.5mm ngaphansi kwesikhumba, yenza umphumela omuhle wokubumba, ukudonsa nokuhlanganisa ukukhula kwemisipha nokudonsa; imithelela kusendlalelo se-collagen 3mm ngaphansi kwesikhumba, okwenza i-collagen ihlelwe kabusha futhi isanda kuzalwa, ixazulula izinkinga zokuguga ngokuthola ukuqina, isikhumba sibe mhlophe, ukususa imibimbi nokuncipha kwama-pores.
Akudingekile ukukhathazeka ngokulimala kwesikhumba ngoba amandla aphesheya kwe-epidermis. Ngaphezu kwalokho, inemisebenzi yokudonsa okusheshayo, ukubumbana okuphikisayo nokusheleleka kombimbi okusheshayo.
1. Indawo yokwelashwa kwe-MAX ngokudubula okukodwa ingakwazi ukusuka emgqeni owodwa kuye emigqeni eyi-11. Ububanzi bokudubula okukodwa bukhulu kune-hifu eyodwa yomugqa, ngakho-ke ngeke nje kunciphise isikhathi esiningi sokusebenzisa ukwelashwa kwe-HIFU, kodwa futhi kuzokwenza amaphuzu wesikhumba amandla ube nomphumela ofanayo futhi owelaphayo ongcono.
2 Yamukela ubuchwepheshe obuphakeme kakhulu, esebenza ngokunembile ekujuleni okuhlukahlukene kwesikhumba ngokuya ngesimo sobuso besikhumba esifakwe amakhanda amathathu okwelapha. Amandla awela kancane isikhumba lapho kwelashwa, futhi akukho ukulimala ngokuphelele. Khonamanjalo, ukujula kokwelashwa kwekhanda kusebenza esikhunjeni kuyavumelana nenani lokusetha, ukuqinisekisa ikhasimende ukuthi alinabuhlungu futhi likhululekile.
3 Inomphumela wokushisa ku-dermal collagen kanye nama-collagen fibers kanye nesikhuthazo esishisayo kusendlalelo samafutha ne-SMAS, umphumela wayo wokwelashwa ungaphezu kwabo bonke ubuchwepheshe be-rf.
4 Kulula futhi kulula ukusebenza, futhi akudingeki izinto ezingasetshenziswa, ezisindisa kakhulu izindleko zokwelashwa.
Ukuqinisa nokwakha umphumela kusobala ngemuva kokwelashwa. Ingagcinwa okungenani izinyanga eziyi-18 kuye kwezingu-24 ngemuva kokwelashwa okukodwa futhi ibone ukukhula okungekuhle kweminyaka yobudala besikhumba kanye ngonyaka.
Impilo ejwayelekile nomsebenzi ngeke kuthonywe uma wenza leso sikhathi ngemuva kokwelashwa.
Langaphambilini Ephathekayo iTescar Therapy CET RET RF enohlelo lwe-Vacuum
Imigqa engu-11 ye-Hifu ye-3D Yokuphakamisa Ubuso
I-3d Body Slimming Device
I-Hifu ye-3d yokususwa kwe-Wrinkl
Umshini we-Hifu 3d
Imigqa eminingi ye-Hifu yedivayisi
Igolide Metal 3D HIFU
100% Izinto zensimbi eziyi-11 imigqa ye-HIFU yobuso & ...
I-ABS 3D HIFU